version 0.5.2 – တိုးတက်လာသော lang attribute ကိုထောက်ခံပံ့ပိုး
ဧပြီလ 21, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 32 comments
ဒီဗားရှင်းမျိုးစုံဘလော့ဂါတစ်ဦးအနည်းငယ်တောင်းဆိုမှုများမှထွက်ပေါ်လာ (အထူးသဖြင့် bi-lingual). ဒီဗားရှင်းတစ်ဦးထားသောစာပိုဒ်တိုများများအတွက်မူရင်းဘာသာစကားအကြံပြုခြင်းပြု (default ကိုထက်အခြား) ခဲ့သလို html lang attribute ကိုသုံးပြီး.
ပစ်မှတ်ဘာသာစကားမှတ်သားထားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ညီမျှသည့်အခါမူရင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားနှင့်အမှတ်အသားပြုထားအပိုဒ် / ထားသောစာပိုဒ်တိုများနဂိုအတိုင်းကျန်ကြွင်းရလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့တခြားဘာသာစကားများဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည် (ပင်ကို default language အတွက် – ထိုကဲ့သို့သောအထောက်အပံ့ကို enable လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ).
ဥပမာအားဖြင့်, အောက်ပါထားသောစာပိုဒ်တိုများရူးစာ၌ရေးထားလျက်နှင့် lang နှင့်အတူတစ်ထွာနှင့်အတူဝိုင်းရံနေသည် = သူ attribute, သင်သည်အခြားဘာသာစကားတွင်ဖတ်ရှုဆိုရင်, သင်ကတခြားဘာသာစကားထဲမှာဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မည် (အင်္ဂလိပ်စာထည့်သွင်း).
ပေးပြီဘာသာစကားတွင်သာစာဖတ်သူများမှပေါ်လာဖို့အချို့အပိုဒ် mark ရန် only_thislanguage class ကိုသုံးမှအစယခုဖြစ်နိုင်. ဒီဗားရှင်းများအတွက်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲယခုခြင်းဖြစ်သည်, ထို translate ကို default configuration ကိုဗားရှင်း 'option ကိုသာမဟုတ်သော default မှာအမှတ်အသားသရုပ်အပိုဒ်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည် (နှင့်ပို့စ်များ, ဆောင်ပုဒ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့် ပတ်သက်. အောက်တွင်ကြည့်ပါ).
တစ် patch ကိုကို default ဆောင်ပုဒ်မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (ကျွန်တော် version ကိုမထားမှီတိုင်အောင်မြော်လင့်လျက်နေပါလိမ့်မယ် အကယ်. ဆုံးဖြတ်ဘဲ3wordpress ကို၏) တစ်အချို့ပို့စ်ရဲ့မူရင်းဘာသာစကား marking enable လုပ်လိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့ Posted သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်ဤ version ကိုခံစားပျော်မွေ့မျှော်လင့်.
ဧပြီလ 21, 2010 တွင် 10:31 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, i’d like to ask you about translation but no in DB, mean translation in caché like iTranslator or Global Translator but in local like transposh, i hope your answer :), ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဧပြီလ 22, 2010 တွင် 9:11 နံနက်
ဧပြီလ 22, 2010 တွင် 8:51 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့, when load since cache it is faster than MySQL, ဒါကြောင့်, for that reason my DB is too big and should be better with cache system (i haveadedicated server and MySQL performance is important), so i’d like to know if is possible do that (not for all pages like supercache, just for translate post), ကျေးဇူးတင်စကား.
ဧပြီလ 22, 2010 တွင် 9:52 ညနေ
If you start that and hitabrick, I will try to assist. သို့သော်, I don’t think this will be done soon in the plugin scope. If you want to implement this, you are welcomed, but I think that this will mostly bearewrite of features that already exist in wp-supercache.
ဧပြီလ 22, 2010 တွင် 4:19 ညနေ
ဧပြီလ 22, 2010 တွင် 9:55 ညနေ
ဧပြီလ 23, 2010 တွင် 8:55 နံနက်
to answer your question, ဟုတ်ကဲ့, I ‘d like to help you with testing the feature and sending back my feedback about it if you need.
ဧပြီလ 28, 2010 တွင် 6:41 နံနက်
သတိပေးခြင်း: require_once(core/constants.php) [function.require-တခါ]: စမ်းချောင်းဖွင့်လှစ်ရန်ပျက်ကွက်: No such file or directory in /home/httpd/gkm.lv/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh.php on line 36
ဧပြီလ 28, 2010 တွင် 6:52 နံနက်
Deleted folder from plugin directory, pasted the 0.5.2 directory, activated and I’m back on horse with all the previous settings and translations. ဂရိတ် plugin ကို!
Peter Hinson ကပြောပါတယ်
ဧပြီလ 28, 2010 တွင် 7:16 နံနက်
ဧပြီလ 28, 2010 တွင် 7:20 နံနက်
We are unaware of such issue, and there are plenty of working installations (including wordpress3beta ကို) soascreenshot would be appreciated
မေ 14, 2010 တွင် 12:17 ညနေ
မေ 15, 2010 တွင် 8:53 နံနက်
Regarding auto translation intervals, နောက်တဖန်အ, not yet, but isanice idea and will be added in the future.
မေ 16, 2010 တွင် 7:43 နံနက်
မေ 18, 2010 တွင် 5:45 နံနက်
မေ 18, 2010 တွင် 11:32 ညနေ
မေ 19, 2010 တွင် 10:39 နံနက်
မေ 19, 2010 တွင် 4:27 ညနေ
မေ 18, 2010 တွင် 11:52 နံနက်
မေ 19, 2010 တွင် 10:41 နံနက်
မေ 19, 2010 တွင် 4:28 ညနေ
If you refer to the “by transposh” link ကို. the rules are written quite clearly in the code there and are not very limiting or imposing (so I hope), I’ll only ask you if you would allow anyone to use your work without credit.
မေ 22, 2010 တွင် 8:27 နံနက်
မေ 23, 2010 တွင် 11:50 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့, sure, you can remove this – but I am not sure it will solve the problem
မေ 18, 2010 တွင် 7:54 ညနေ
မေ 18, 2010 တွင် 11:31 ညနေ
I have checked up to beta 1, if there are errors with beta2I’ll get to it, မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို – what happened when you tried? any issues?
မေ 19, 2010 တွင် 12:49 နံနက်
ဝမ်းနည်းပါတယ်, not good. Before I set up this site on WP and WPMU 2.9.x and BP 1.2.x and everything was translated; the article, the posts, all other content on the page, the plugins text, the menu items, everything. But now WP has changed its structure and menuing system, I fear there are some quite serious issues to be resolved. Takealook at http://virtualcrowds.org/zh/ and you will see how only parts of the page/plugins/menus have been translated. Itsareal shame because itsagreat plugin and does (did) exactly what I wanted it to… 8^(
မေ 19, 2010 တွင် 1:22 နံနက်
မေ 19, 2010 တွင် 1:51 နံနက်
မေ 19, 2010 တွင် 1:58 နံနက်
Takealook at this and I think you will see what I mean. http://virtualcrowds.com/zh/ <– (နှင့်, not org). That site is on the same server, running 2.9.2 but exactly the same BP theme and Transposh translates everything.
မေ 19, 2010 တွင် 5:02 နံနက်
အိုကေ, I’ve reverted the site back to WP2.9.2 and using exactly the same theme/plugins you will see that Transposh works exactly as I described. Seems to me that its not the theme but something to do with the way Transposh works (or doesn’t) with WP3.0b2, which of course, by the time we get round to RCs, may well be sorted.
မေ 19, 2010 တွင် 4:26 ညနေ